Fitohizan'ny hafatra : Ka inona no "diso" @ ireo "déduction"-ko ireo ry ...
rhaj0 - 21/03/2018 14:42
Ka inona no "diso" @ ireo "déduction"-ko ireo ry RBNIR aaa??? Milahatra tsara @ resa-Baiboly ireo, miampy ilay teorian'i RBNIR ny @ izao "galaksia vaovao TSY trohin'ny trou noir" izao.
Ka eny sa tsia, misy diso sa tsisy diso ireo points 10 ireo ry RBNIR, fa tsy eto no anaovanao revi-na politifaikany mihodikodina manasafotofoto eo fotsiny aaa...
ny fara-andro araka ny resa-baiboly miampy resa-dRBNIR
RBNIR - 21/03/2018 14:52
Diso B daholo hoy aho rhajo a! hita marina fa tsy mpandalina ianao....
rhaj0 - 21/03/2018 15:16
tonga dia safobemantsiny indray no paikan-dRBNIR an...
Fa dia izaho indray koa ve hi-contredire anao ry RBNIR, fa dia voninahitra ho anao @ ireto eee...
bravo, fa dia DISO B izany ireto, hozy i RBNIR ee..
1- "kintana miraraka no fambara"
2- "ho avy tahaka ny mpangalatra" ny Zanak'olona
3- hangonin'ireo (anjely) ny manana "tombokase"
4- ny Lanitra dia feno Anjely fotsy, mibaby olom-boafidiNY manao robe lava fotsy
RBNIR - 21/03/2018 15:37
Ny fomba andaharanao azy no diso fa milahatra tsara ireo....
Ny fiainantsika ankehitriny mandrampahatonga any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao (galaxie vaovao) dia voalahatra mazava manomboka eo amin'ny bokin'ny apokalipsy 14 ka hatramin'ny farany (apokalipsy 22)..
Araho ity rohy ity fa ato no hotantaraina amin'ny antsipirihiny (ao ianao mahita hoe rahoviana no ho maizina ny masoandro, ny kintana hiraraka, ny olona angonin'ny anjely ny fandoroana ny tany ary ny fidirana any amin'ilay fiainana mandrakizay (fandaozana ity tany ity sy fidirana any amin'ilay galaxie vaovao....
RBNIR - 21/03/2018 15:49
Somary ho lavalava ihany izy ao fa raha te hahafantatra ianao dia vakio tsikelikely e!
Manomboka amin'izao fotoana iainantsika izao io ka hatramin'ny fidirana any amin'ilay galaxie vaovao, milahatra tsara ny fitantarana azy ao amin'ny bokin'ny apokalipsy...
Apokalipsy 14 ka hatramin'ny apokalipsy 22.......
rhaj0 - 21/03/2018 16:05
Aiza ary inona ilay DISO ry RBNIR aa... Azo asesy dia milamina ve izy io ee??
Aiza ary inona @ ireo roa ireo ilay DISO ry RBNIR aa...
RBNIR - 21/03/2018 16:37
araho ilay rohy vaovao ary rhajo a! dia manana faharetana e!